Semalt: ईन्टरनेट फ्रड र स्क्याम्स को बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने चीजहरू
इन्टरनेट जालसाजी भनेको कसैको सम्पत्तिको फाइदा लिन इन्टरनेट सफ्टवेयर वा सेवाहरूको अवैध प्रयोग हो। हरेक वर्ष, लाखौं देखि अरबौं डलर इन्टरनेट वेबसाइट, ईमेल, र अन्य समान चीजहरू मार्फत चोरी हुन्छन्। धेरै उच्च-प्रोफाइल ह्याकरहरूले नविकरण विक्रेताहरूको नाम प्रयोग गरी पीडितहरूलाई जालमा पार्न र तिनीहरूको पैसा इन्टरनेटमा लिनका लागि प्रयोग गर्छन्। समय बित्दै जाँदा, नागरिकहरू र कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूका लागि इन्टरनेट धोखाधडी ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ।
रस बार्बर, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, आपराधिक गतिविधि को यस प्रकारको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ।
कसरी आफूलाई जोगाउने
यदि तपाईंलाई इन्टरनेट फ्रडको प्रकारको बारेमा सबै कुरा थाहा छ भने वेबमा आफूलाई बचाउन यो सम्भव छ। चोरी क्रेडिट कार्ड, अज्ञात ईमेलहरू, लटरीहरू, अविश्वसनीय वेबसाइटहरू र नक्कली लिलामीहरू अनलाइन घोटालाहरूको सबैभन्दा सामान्य प्रकारहरू हुन्। इन्टरनेटमा सुरक्षित रहनको लागि त्यहाँ कुनै नियम छैन; जहाँसम्म, तपाईं आफ्नो क्रेडिट कार्ड विवरण बचत गरेर आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं अज्ञात संलग्नहरूमा क्लिक गर्नबाट जोगिनुहोस् र तेस्रो पार्टीसँग तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम वा पासवर्ड साझा नगर्नुहोस्।
के गर्ने यदि तपाइँ सिकार हुनुभयो
अनलाइन घोटालाहरू को संख्या यी दिन बढ्दो छ, त्यसैले तपाईं लाई केहि चीज दिमागमा राख्न महत्त्वपूर्ण छ:
१. केवल ईमेलहरूलाई जवाफ दिनुहोस् जुन प्रामाणिक आईडीबाट आएको हो। यदि तपाईंको स्प्याम फोल्डरले ईमेलहरूको महत्त्वपूर्ण संख्या प्राप्त गर्दैछ, तपाईंले तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो मेटाउनुपर्नेछ।
२. तपाईंले बिर्सनु हुँदैन कि कुनै वास्तविक जागिरको लागि भिसा प्रशोधन शुल्क, प्रमाणीकरण शुल्क, र प्रशासकीय शुल्कहरू सहित शुल्क चाहिन्छ। यदि कसैले तपाइँलाई जागिर प्रदान गर्दछ र तपाइँले शुल्क बुझाउन चाहानुहुन्छ भने, त्यहाँ संभावना छ कि उसले वा उसले तपाइँलाई पासोमा पार्न खोजिरहेको छ।
You. तपाईले कसैलाई पासोमा पार्नु हुँदैन जसले भन्छ कि तपाईले चिट्ठा जित्नुभयो। त्यहाँ अनलाइन त्यस्तै कुनै चीज छैन, त्यसैले ह्याकरहरू केवल तपाईंलाई आकर्षित गर्ने र तपाईंको पैसा चोर्ने उद्देश्य राख्छन्।
कसरी आफ्नो पैसा फिर्ता प्राप्त गर्ने
साइबर कानून कानूनी संसाधन र तपाईंको पैसा पुन: प्राप्ति गर्न तरिका प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं त्यस्ता घोटालाहरूको शिकार हुनुभयो भने, तपाईं इन्टर्नेट अपराध उजूरी केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीमा उजुरी गर्नुहोस्, र तिनीहरूले आईपी ठेगाना ट्रेस गर्नेछन् जहाँबाट तपाईंको पैसा चोरी भएको छ।
तपाइँ तपाइँको बैंक मा एक ग्राहक विवाद समाधान फार्म भी पेश गर्न सक्नुहुन्छ ताकि अर्को लेनदेन रोकिन्छ। यसको लागि, तपाईंले आफ्नो नजिकको बैंक शाखालाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूलाई सबै विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्। अदालतले तपाईंको उजुरीमा थप छानबिन गर्न सक्छ, र यस मामलाको सुनुवाई हुनेछ र नौदेखि एघार महिनामा निर्णय हुनेछ।
इन्टरनेट जालसाजीका प्रकारहरू
यहाँ इन्टर्नेट घोटाला का केहि प्रमुख प्रकारहरु छन् जुन कानून प्रवर्तन र नियामक प्राधिकरणहरु र उपभोक्ता संगठनहरु:
लिलामी र खुद्रा योजना अनलाइन
ठग्ने योजनाहरू प्राय: अधिक र अधिक व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न लिलामी वेबसाइटहरूमा देखा पर्दछ। ह्याकरहरूले तपाईको पैसा यी चोरी योजनाहरु मार्फत चोरी गर्न प्रयास गर्छन् तपाईलाई सुन्दर रकम प्रदान गरेर वा अन्य देशहरूको यात्रामा।
यदि कसैले तपाईंलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्‍यो र व्यापार अवसर प्रदान गर्दछ भने, त्यहाँ संभावना छ कि उसले वा उसले तपाईंलाई पासोमा पार्ने कोशिश गरिरहेको छ। निजी अवसर आईडी मार्फत कहिले पनि व्यवसायिक अवसरहरू प्रस्ताव गरिदैन।
पहिचान चोरी र धोखाधडी
केही इन्टरनेट जालसाजी योजनाहरूले पहिचान चोरीहरू समावेश गर्दछ - गलत तरिकाले तपाईंको व्यक्तिगत डाटाको प्रयोग र धोका जसले धोखा वा धोखाधडी समावेश गर्दछ।